टेकुबाट भागेर धरान आएका व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण छैन, डिप्रेसनको समस्या भएको आफन्तजनको भनाई(भिडियोसहित)
टेकुबाट भागेर धरान आएका व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण छैन, डिप्रेसनको समस्या भएको आफन्तजनको भनाई(भिडियोसहित) मानसिक विभागका चिकित्सकद्धारा परामर्श दिइदै, 'थ्रोट स्वाब' टेकु पठाइयो
प्रकाशित: फाल्गुन २३, २०७६ / 2,118 पटक पढिएको
कोरोनाका शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई राख्न तयार गरिएको वीपी प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्ड ।
धरान: टेकुबाट भागेर धरान आएर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत व्यक्तिमा कोरोनाको कुनै लक्षण पनि नदेखिएको पाइएको छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार टेकुबाट भागेर पुनः प्रतिष्ठानमा उपचारको लागि आइसके पछि शंका निवारणकै लागि नमुना जाँचको लागि टेकु अस्पतालमा पठाइएको छ । ती व्यक्तिलाई कोरोना भए नभएको पुष्टि गर्न थ्रोट स्वाब जाँचको लागि पठाइएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा.अशोक ऐरले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती व्यक्तिमा कोरोना सम्बन्धी कुनै लक्षण देखा परेको छैन । ‘उहाँमा कोरोना सम्बन्धी कुनै लक्षण केही पनि देखिएको छैन । शुरुमा स्क्रिनिङ गर्दा पनि प्रारम्भिक लक्षणहरु ज्वरो आउनेलगायत केही पनि छैन । उहाँको गतिविधिले गर्दा मानिसहरु त्रसित भएको अवस्था छ,’उनले भने,‘उहाँलाई विरामी नै भनिहाल्नु पर्ने जरुरी छैन । शंका लागेको मात्र हो, शंका त जसलाई पनि लाग्नसक्छ ।’
वीपी प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा.अशोक ऐर ।
धरान १० घर भएका ती व्यक्ति बिहिबार टेक अस्पतालबाट भागेर विराटनगर एयरपोर्ट हुदै धरान आएका थिए । आफन्तजनले उनलाई प्रतिष्ठानमा उपचारको लागि लगेका थिए । तर, उनी राती पुनः प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डबाट पनि जर्बजस्ती भागेर गएका थिए । प्रहरीले पुनः उनलाई फेला पारेर ल्याएका थिए । उनी ३१ महिना कोरिया बसेर २० गते नेपाल आएका थिए भने २१ गते आफै टेकु अस्पतालमा गएका थिए ।
प्रतिष्ठानले उनलाई विरामी भइसकेर आइसोलेसनमा राखेको नभै रिपोर्ट नआउञ्जेलको लागि मात्र राखिएको प्रष्ट पारेको छ । ‘आइसोलेसनको लागि मात्र राखेको हो । विरामी भइसकेर आइसोलेसनमा राखेको होइन । रिपोर्टमा नेगेटिभ आयो भने घर गइहाल्नुहुन्छ, पोजेटिभ आयो भने थप उपचार हुन्छ,’सहप्रवक्ता डा.ऐरले उपचार नपाएको भन्ने आफन्तको गुनासोप्रति भने,‘उपचार नगरेको होइन, कुनै विराम नै छैन । के उपचार गर्ने हो ? उहाँलाई अहिलेको लागि अरुबाट छुट्याएर राख्ने मात्र हो । विरामी भए पो उपचार गर्ने ? जाँचको लागि पठाइएको छ, त्यसको रिपोर्ट आएपछि थाह हुन्छ ।’
ती व्यक्तिमा कोरोना भन्दा पनि अन्य डिप्रेसनलगायत समस्या भए सम्बन्धित विभागका बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुबाट उपचार हुने पनि सहप्रवक्ता ऐरले जनाएका छन् । ‘वीपीमा कोरोनाको टिम नै छ, अरु समस्या, शंकाहरुबारे पनि विभिन्न विभागको डाक्टरहरुबाट पनि परामर्श भइरहेको छ,’उनले भने,‘उनको अवस्था हेर्दा डरले अस्थिर स्वभाव, व्यवहार देखा परेको छ । भुकम्पको बेला मानिसहरुलाई भएको डरजस्तै देखा परेको हुनसक्छ ।’ ती व्यक्तिमा डर, त्रास तथा मानसिक समस्या केही भएको हो कि भनेर मानसिक रोग बिशेषज्ञहरुबाट परामर्श भइरहेको छ ।
आफन्तजन भन्छन्,‘डिप्रेसनको विरामी हो, डाक्टरहरुले समयमै परामर्श गरिएन’
टेकुबाट भागेर घर आएका व्यक्तिका आफन्त ।
विरामीका आफन्तहरुले पनि कोरोना नभएर डिप्रेसनको शिकार भएको बताएका छन् । उनी कोरिया जानुअघिदेखि नै डिप्रेसनको विरामी भएको उनका नजिकका आफन्तहरुको भनाई छ । खास गरी आमाको निधन भएपछि उनको मानसिक अवस्थामा असर पुगेको र सानोतिनो कुराहरुमा पनि असामान्य व्यवहार देखाउने गरेको आफन्तहरुले बताएका छन् ।
जेठानी दिदीले कोरियाबाट काठमाण्डौं फर्केपछि घाँटीमा केही समस्या आएपछि टेकुमा उपचार गराउन गएको र आइसोलेसनमा राखेपछि थप मानसिक त्रासमा परेर भागेर घर आएको बताइन् । ‘मानसिकरुपमा पहिलादेखि नै समस्या थियो, सानो कुरामा पनि अनेक शंका गर्नुहुन्थ्यो,’उनले भनिन्,‘३ बजे इर्मजेन्सीमा भर्ना भएको थियो । यहाँ आइसोलेसनमा सारिदिएछ, तर डाक्टरहरुले आएर हेरिनै दिएनन्, काउसेलिङ गरिएन । हामी दिनभरि सँगै थियौं, त्यस्तो हो भने हामीलाई किन सँगै बस्न दिइयो ।’
उनका जेठानले आमाको मृत्यु पछि मानसिक असर पर्दै गएको र डिप्रेसन भएको बताए । दक्षिण कोरियामा पनि कोरोना देखिएपछि उनको मानसपटलमा असर पुगेर घर फर्केको बताए । हिजो बिहिबार राम्रो परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका उनले आज भने मानसिक विभागका डाक्टरले राम्रो परामर्श पाएको बताए ।
यो पनि: टेकुबाट भागेर धरान आएका विरामी वीपीको आइसोलेसनबाट पनि भागे, एक घण्टापछि प्रहरीले भेट्यो